Izitayela Zokuthenga Nokuthengisa Zabathengi zango-2021 | Martech Zone
Uma kukhona imboni eyodwa esabona ukuthi ishintshe kakhulu kulo nyaka odlule ibidayisa. Amabhizinisi angenawo umbono noma izinsiza zokusebenzisa ngokwamadijithali azithole eseyincithakalo ngenxa yokukhiya phansi nobhadane.
Ngokusho kwemibiko ukuvalwa kwezitolo kudlulele kwabangu-11,000 2020 ngowezi-3,368 kuvulwa izitolo ezintsha ezingama-XNUMX kuphela.
Khuluma Ibhizinisi Nezombusazwe
Lokho akusishintshile isidingo sezimpahla ezihlanganisiwe zabathengi (CPG), noma kunjalo. Abathengi babeya ku-inthanethi lapho imikhiqizo yayithunyelwa kubo noma babegcina iveni.
I-RangeMe iyipulatifomu eku-inthanethi eyenza abathengi abathengayo bakwazi ukuthola imikhiqizo evelayo ngenkathi banika abahlinzeki amandla okuphatha nokukhulisa imikhiqizo yabo. Bakhiphe le infographic eningiliziwe kumathrendi aphezulu we-CPG we-2021.
I-22021 kuzoba yisikhathi sokuthi amabhizinisi azibonele wona ngokuzayo njengoba siqhubeka nokuzula imiphumela yobhadane lomhlaba wonke. Kubathengi, abahlinzeki, nabathengisi, ukutholakala komkhiqizo okusha kuzoba nokugxila kakhulu kwezempilo kanye nokuphila kahle kanye nezinhlelo ezikhulayo zokusimama nezinhlobonhlobo. Kuzobuye kugxilwe ekuthengeni okulula, ukuthola indawo, kanye nokwazi amanani.
Amathrendi aphezulu wokuthengisa kanye ne-CPG ka-2021
Amathrendi aphezulu okuthengisa
Ukuthengwa kwentengo - 44% wabathengi bahlela ukunciphisa izinto abangazidingi njengoba amanani abantu abangasebenzi eqhubeka nokukhuphuka.
Thenga-Manje-Khokha-Kamuva - Kube nokukhuphuka okungama-20% konyaka nonyaka (YoY) wokuthengwa kwamanje-okukhokhelwa kamuva - okubalwa u- $ 24 billion ekuthengisweni.
Diversity - Kulesi sikhathi esisha sokuthenga abathengi, imboni isebenza ukuletha ukubandakanywa nokuhlukahluka phambili nokubeka phambili imikhiqizo ephethwe abambalwa.
Ukusimama - Abathengi abazi imvelo bafuna imikhiqizo ukunciphisa inani lokupakisha abalisebenzisayo.
Thenga Encane, Thenga Indawo - Abathengi abangama-46% bebesethubeni lokuthenga namabhizinisi endawo noma amancane kuleli holide lokugcina kunamaholide adlule.
Lula - 53% wabathengi bahlela ukuthenga ngezindlela ezibongela isikhathi, noma ngabe akuyona intengo ephansi kakhulu.
eCommerce - Kube nokunyuka okungu-44% kwezitolo eziku-inthanethi, okuyisiphindwe kathathu isilinganiso sokukhula minyaka yonke e-United States seminyaka edlule!
Isitini Esishintshiwe Nosimende - I-44% yabathengisi abaphezulu abangama-500 abanezitolo ezingokwenyama banikeze i-curbside pickup, umkhumbi-esitolo, futhi Thenga Ku-inthanethi, Khetha Esitolo (IBOPIS)
Amathrendi Wendlela Yokuthenga Yabathengi
Ukunethezeka kanye ne-Premium Indulgences - Ukuthengisa okunethezeka ngo-2020 kukhuphuke ngo-9% ngonyaka odlule njengoba abantu abasebenza emakhaya bebebukeka bezothuthukisa izindawo zabo futhi bezitotosa.
Ukondla kwengqondo nomzimba - 73% wabathengi bazibophezele ekusekeleni impilo yabo; Ama-31% okuthenga izinto eziningi ezenzelwe impilo yazo (kufaka phakathi isisindo, impilo yengqondo, amasosha omzimba, njll.)
Gut Health - 25% wabathengi bomhlaba wonke bahlushwa yizinkinga zezempilo zokugaya ukudla. Abathengi bafinyelela kumikhiqizo eyisekelayo futhi bagwema imikhiqizo engayisekeli.
Izembatho Zibuyela Emuva - Njengoba ubhadane luhlehla, imboni ilindele ukukhula okungu-30% kokuthengiswa kwezingubo kulo nyaka.
Ukuqhuma Okutshalwe Ezitshalweni - Kube nokukhula kwe-YoY okungu-231% ngoMashi wokuthengisa okusha okususelwa ezitshalweni okuqhutshwa impilo, ukudla okuhlukahlukene, nokutholakala komkhiqizo.
Ukuhlekwa usulu - Kube nokukhuphuka okungama-42% kusesho lweGoogle ngeziphuzo ezingezona ezotshwala!
Izitayela Zokuziphatha Zokuthengwa Kwabathengi Bomhlaba Wonke
Impilo Yokuvimbela - Abathengi abangama-50% baseChina bahlela ukuchitha imali ethe xaxa ekunakekelweni kwezempilo okuvimbela, amavithamini nezithako, nokudla okuphilayo
Umkhiqizo Omahhalas - Kube nokukhula okungu-9% kwemikhiqizo yokungabekezelelani kokudla. E-Vietnam, ngokwesibonelo, ezinye izindlela zobisi ezingenalo ubisi ezinjengezinhlobo zobisi ezisuselwa kumantongomane ziyakhula ekuthandeni.
I-Vegan - Abathengi baseBrithani abangama-400,000 bazame ukudla kwe-vegan ngo-2020! Izinkampani ezingama-600 zase-UK zithuthukise iVeganuary futhi zethula imikhiqizo emisha yamavegan ayi-1,200.
Ukuhluzwa Kwasekhaya - Abathengi abangama-60% eSpain babone imikhiqizo yokudla yaseSpain njengento ebalulekile ekuthengeni. Abathengi baseJalimane baphehla ukuthambekela kwendawo kokuthenga okusimeme nokuzibophezela emphakathini.
Tags: isembathobopisisitini nodakathenga inkokhelo eku-inthanethi esitoloisabelo esivaliweizitayela zokuthenga zabathengiizimpahla ezihlanganisiwe zabathengiukutholwa kwasekhayaukuthengisa okungaxhunyiwe ku-inthanethiukumaketha kwe-omnichannelukuthengisa onlineimpilo yokuvikelaukuqonda intengoukuthengisa okuthengiswayoizitayela zokuthengisaukusimamavegan